The 25 imidlalo best of 2015: 15-11 - Izindaba Rule
The 25 imidlalo best of 2015: 15-11
Lesi sihloko osesikhundleni “The 25 imidlalo best of 2015: 15-11 - Hhayi ekupheleni kwezwe esiphila kulo” lalotshwa Keith Stuart , Rich Stanton naseJordani Erica Webber, ngoba theguardian.com ngoLwesithathu 16th December 2015 10.05 UTC
Sesikhathele sekuphakathi Countdown of imidlalo salo nyaka ayetholakala, futhi isitolimende lanamuhla inikeza esinye Ukukhetha eclectic. Kusukela drama ezibhubhisayo ukuba yinqaba escapades indima-ukudlala, Yilezi leziqu imidlalo yethu abalobi babedlala kakhulu kulo nyaka.
Njengoba naphakade, babe lephatselene bese ufaka iziphakamiso zakho siqu esigabeni imibono.
15. Wonke umuntu ingasekho to the Rapture (PS4)
Uma Fallout 4 a classic American post-apocalypse ke Wonke umuntu ingasekho to the Rapture kuyinto ehlukile ephelele British. Njengoba wena traipse eduze ishiywe 1980 eWest Midlands emzaneni, ukulalela izipoki izingxoxo esidlule ukuzama ukuthola kwenzenjani, unomuzwa yilo ncamashi kanjani Brits uzoyiphendula lolu hlobo nenhlekelele, ikakhulukazi esikhathini ngaphambi Twitter. Singathanda imihlangano ehholo edolobheni, singathanda akhononde Ukuhlupheka, futhi singathanda sokuhleba. Abantu babethi Ukuhlwithwa "abacibisheli ihlangana ukuphela kwezwe" futhi ngokuqinisekile njengoba enhle futhi ome njengeqanda njengoba kusikisela ukuthi (futhi soundtrack kuyinto enkulu kakhulu).
14. Guide Beginner sika (PC / Mac)
game Gamer ukucabanga sika ... Guide Beginner sika.
Umhlahlandlela I saqala sika kulokho, one angase abuze? Futhi abekho izimpendulo lula kuleli zwe quizzical of dengwane futhi isigamu-siphelile imidlalo, okuyinto siholwa ngokusebenzisa ngumuntu umlandzi tricksy. Lena into ngesimo umdlalo, indaba akufanele pried zibe esiningi kusengaphambili, futhi wajabulela ngesikhathi esisodwa. Ngezinye izikhathi waklama namawashi ahlekisayo, abanye melancholy, kuba njalo engavamile. Like its predecessor, The Stanley Parable, The Beginner’s Guide is for gamers who want to think about what games are.
13. Life is Strange (takhiwo amaningi)
← Star Wars: The Force ongenza Review The 25 imidlalo best of 2015: 10-6 →